Ukuhambelana kweTaurus kunye neTaurus: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo - Iimpawu Zezodiac
Izilwanyana Zamandla Omoya
Ukuhambelana kweTaurus kunye neTaurus: Ubuhlobo, uthando kunye nezesondo
Yintoni iTaurus kunye neTaurus ehambelana nayo? Akukho nto imangalisayo! Le duo yothando inelinye lawona manqanaba aphezulu okuhambelana kwi-zodiac! Abantu ababini beTaurus ngokudibeneyo yimizekeliso 'ertyisi kwipod!' Ezi bugs zothando zilawulwa nguVenus zikhululekile kunye kwaye zikhawuleza! Luthando lonke, ii-cuddles, kunye nomnqweno osuka apho!
Uzinzo yeyona nto iphambili kunxibelelwano lweTaurus kunye neTaurus. Obu buntu babini buyafana kakhulu kufuneka ukuba bube zihlobo. Bayakuthanda ukuba kunye kwaye bathathe nantoni na eyonwabisayo. Ukutya, umculo kunye nobugcisa bunomtsalane kwiTaurean.
Ukutya kunomdla ngakumbi, kwaye akukho nto ifana nokuzisa ii-foodies ezimbini kunye! Ukutya ukutya kunye nexesha lothando ekhitshini ngokuqinisekileyo kuya kwenzeka. Olunye unyango olumnandi lusenokungena kwigumbi lokulala!
Obu budlelwane bunengqondo kwaye busebenza ngaphandle kweendonga zokulala. Kodwa, oko akuthethi ukuba ezi nkunzi zimbini azinakulikhulula icala lazo lasendle xa zibucala kwigumbi lokulala! Ubundlobongela kunye novakalelo oluphezulu lokuchukumisa yirisithi phakathi kwamashiti. Eyona nto ibaluleke kakhulu, akukho mntu wazi ubushushu beTaurus njengenye iTaurus. Akukho mfuneko yokuzichaza xa esi sibini sidibana. Bayazi omnye nomnye kakuhle, ke iinkcazo azingomgaqo.
Inye into iTaurus ’eziyifunayo lolwalamano olukhuselekileyo. Utshintsho aluphazamisi kwaye ayisiyiyo into eluxabisayo iTaurus. Ulwalamano oluzinzileyo nolunokuxelwa kwangaphambili lwenza iTaurus ikhuseleke ngakumbi. Ukuba kukho umbuzo wokuthenjwa, iTaurus iba engazinzanga, engaqinisekanga, kunye nomoya. Akufani neTaurus yokunganyaniseki kodwa ukuba kuyenzeka, elinye iqabane laseTaurus livumela ubushushu bulawule!
Uluhlu lweziqulatho zeTaurus kunye neTaurus
Ukuhambelana kweTaurus kunye neTaurus
UTaurus kunye noTaurus Uthando
Isondo iTaurus kunye neTaurus
Indoda yaseTaurus kunye neTaurus Woman ukuhambelana
Umfazi weTaurus kunye neTaurus Man ukuhambelana
I-Taurus kunye ne-Taurus Love Match Wrap-Up
Ukuhambelana kweTaurus kunye neTaurus akuthandabuzeki! Xa abantu behlangana neeTaurus ezimbini ngothando, ngamava angalibalekiyo. Kufana nokungqina ukuphela kokonwaba-emva kokuphela kwentsomi kubomi bokwenyani. Esi sibini sithandanayo xa sijamelene ngamehlo. Bahlala bephathaphathana bethandana. Bahamba kunye-ngesandla, nkqu neminyaka ukuya kubudlelwane.
Xa ezinye izibini ezininzi ziqhekeka, unxibelelwano lweTaurus kunye neTaurus luhlala luhlala luhleli. Ngaphambi kokuba uyazi, esi sibini sihamba sivela kubahlobo nabo, abathandi, kunye nabantu abatshatileyo abonwabileyo ixesha elide. Abahlobo babo bahlala bebuza ukuba bahlala njani emhlabeni kunye. Impendulo ihlala ifana, 'Uthando, umonde, ukulalanisa, intlonipho noxolelo.'
IiTaurus zizidalwa zesiko. Bayakonwabela ukucwangcisa ubomi babo kunye. Bayalixabisa ithuba lokuxoxa ngexabiso abaligcinayo bobabini. Esi sibini konke malunga nosapho, ke kuqhelekile ukufumana ubudlelwane beTaurus kunye neTaurus kunye neebhandi zothando ezinomntwana omnye okanye nangaphezulu. Esi sibini senza abazali ababalaseleyo. AmaTaureans akhulisa abantwana babo ukuba basebenze nzima kwaye bonwabele zonke izinto ezintle ebomini.
Kunzima ukucinga uthando olungena nzulu kunolo kubudlelwane beTaurus kunye neTaurus. Ezi zimbini zineempawu ezihambelana nokugqibelela. Bobabini banothando lwexesha labucala kunye nemeko yekhaya. Bobabini bayakonwabela ukuba kunye nosapho kunye nabahlobo. Iinjongo zexesha elide zikwalungelelaniswe xa abantu ababini baseTaurean behlangana. Xa uthando lwenzeka kubo, kuba ngathi iinkwenkwezi ngokwazo zihambelana nokugqibelela.
Xa usabelana ngokugxila ephupheni, abantu ababini baseTaurean banokwenza naliphi na iphupha libe yinyani. Le duo ayinakunqandwa ngenxa yentloko yabo enzima kunye nokuzimisela. Babeka iinjongo kunye nesicwangciso esifanelekileyo. Imiqobo iyawa njengamagqabi ekwindla emoyeni. Ukuzinikezela luphawu lobuntu beTaurus. Nje ukuba bazinikele kwinto ethile, abaphulukani nembono yokuzibophelela kwabo nabo.
Abantu ababini baseTaurea benza izihlobo ezikhawulezayo. Uthando luyalandela kungekudala. Baba ngabathandi ngokukhawuleza kodwa bahlala bengabahlobo abasenyongweni. Xa onke amandla elungelelanisiwe, indlela yothando lweeTaurus ezimbini zigudile kwaye zenziwe ngabom.
Imiphefumlo yeTaurus ayizondi nje utshintsho, ibaleka kuyo ngelixa ikhwaza kubusuku obumnyama! Kunzima ukugcina izinto zintsha kwaye zintsha. Kunzima nokuba le miphefumlo mibini yomhlaba ayamkeli ithuba ngamanye amaxesha. Ukuma kunokwenza awona mava mahle athande ukuba mnandi kwaye angalingani. I-Taurus ifuna ukonwabela iziyolo ebomini. Ke, ukungafuneki kwemeko yokufa kukuqinisekisa ukungqinelana kweTaurus kunye neTaurus.
Ewe, ukuhambelana okuphezulu kweTaurus kunye neTaurus kuqinisekisa umdlalo omangalisayo wothando. Kodwa, oko akuthethi ukuba ukuhlangana kweTaurus kunye neTaurus kwenza uthando luhlale luhleli. Ukwahluka kweendawo ekugxilwe kuzo phakathi kokumataniswa kwezothando, kukhokelela kukukhathazeka. Ukuba enye iTaurus ifuna ukuzibophelela kunye nolunye ubuhlobo, izinto zinokuba krakra. Akukho mntu ubambe ingqumbo ngokukhawuleza kuneTaurus eneemvakalelo ezininzi.
I-antics yeTaurus kunye neTaurus bathanda umdlalo xa kwigumbi lokulala kuluhlu lwe-gamut. Ngamanye amaxesha ingoma yengoma ebusuku ithi Whitesnake's Slow ‘n Easy. Ngamanye amaxesha uthando lwabo lwe-antics lufanelekile ngakumbi kwi-Scorpion's 'Rock You Like Hurricane!' Iiseshoni zabo zokwenza uthando zinethulo elide kuqala! I-Taurus ilawula umqala, ke uninzi lomqamelo uyathetha kwaye uhlebeza ii-nothings ezimnandi zilungile!
I-Taurus sisidalwa esithatha ixesha laso. I-Foreplay yenye yezinto abazithandayo ukuzenza. Okude le duo yothando ikhupha ulonwabo, ngcono. Baza kufuna ukuqinisekisa ukuba bavukile ngaphambi kokuba baye kuloo mzuzu wolonwabo.
Ngoku, sukucinga ukuba umsindo yimvakalelo oza kuyibona kwigumbi lokulala laseTaurus. Xa aba babini beyekile umsindo wabo, ukukrokra kunye nokwenza uthando okumnandi ngaphandle kwefestile. Kodwa, ukuba benza emva kwengxabano, ke isondo silungile! Ezi zinto zimbini zenyama ziyayazi indlela yokwenza uxolo omnye komnye!
Igumbi lokulala yindawo enye apho kukho izidalwa ezithuthuzelayo. Amashiti acocekileyo, ukugquma iibhedi ezithambileyo, kunye neepowhji ezinkulu zokubeka ibhedi ebhedini yokumkani. Kukho ubuchule bobugcisa kuyilo lwegumbi lamaTaurean zizidalwa ezibonakalayo. Iitoni zomhlaba ezinobumba obunemfudumalo obufudumeleyo, iamethyst ekhanyayo, kunye nemifuno enzulu inika igumbi 'ukuziva ukhuselekile, ekhaya.' Kulapha aba bantu baseTaurean banokuziyeka ukuba baphumle okanye bakwimeko yokulahlwa okungalawulekiyo!
Unxibelelwano lweTaurus kunye neTaurus
Kwakhona, iiTaurus zihambelana nomqala njengembalelwano ye-anatomical. Ke, bayathanda ukuthetha omnye nomnye ngayo yonke into nangayo yonke into. Izihloko ezithandwayo zencoko zibandakanya izinto zokuzonwabisa, ifilosofi kunye nobugcisa.
Ubuntu beTaurus kunye neTaurus bahlala banamazwi okumnandi nawo. Ukuba abaziimvumi zobungcali, uya kubafumana bonwabela ubusuku bekaraoke kwiklabhu yendawo. Ngokuqinisekileyo baya kuba nomatshini we-karaoke ekhaya ngokunjalo.
Yinto entle iTaurus ngabaphulaphuli abakhulu. Bayabuqonda ubulumko obusemva 'Thetha kancinci kwaye umamele kakhulu.' Kukho amaxesha apho uza kubona izibini zeTaurus kunye neTaurus zihleli ngokuzolileyo phakathi kwesihlwele. Ngeli xesha basela kuyo yonke into abanokuyifumana kwindalo esingqongileyo. Ukwenza njalo kubanika ithuba lokufunda okuninzi malunga nabantu abanxibelelana nabo kunye nento ebenza baphawule.
Kuba lo mqondiso weenkwenkwezi ulawula umqala, iiTaurus zithetha kakhulu. Banikela ngezimvo zabo, kwanaxa kungekho mntu ubuzayo. Ukuzimisela ukuthetha iingqondo zabo ngokuphandle ngamanye amaxesha kubonisa ingxaki. Ngoba? Abantu baseTaurean bafuna ukunyaniseka ngalo lonke ixesha. Izimvo zabo zinyanisekile ngamanye amaxesha. Banokudibana necrass okanye rhabaxa. Amagqabantshintshi anokubangela ukungavisisani kumdlalo wothando weTaurus kunye neTaurus.
Uninzi lwexesha, nangona kunjalo, abantu baseTaurean bahle kwaye banobuciko. Bakhetha awona mazwi amnandi kwaye achazayo ukuba bathethe indlela abavakalelwa ngayo. Izidalwa zoyilo, abantu baseTaureans bakubona ukusetyenziswa kolwimi njengobugcisa.
Ukungqubana kweTaurus kunye neTaurus
Ukulwela umdla oqhelekileyo kwiTaurus kunye neTaurus matchup ayiqhelekanga. Amandla awunasiphako xa esi sibini sinenjongo efanayo yokuphela. Ukuba esi sibini sigxile kwiinjongo ezahlukeneyo, idabi liyaqhubeka. Umbuzo uvela ukuba yeyiphi injongo yeqabane eya kuthi ikhokele ngokubaluleka. I-Taurus iludela utshintsho. Ke, ukuthatha isigqibo sokuba ngubani ofuna ukuba kugxilwe kunokuba luthambo lwembambano.
AmaTaurean akhula ngengqondo emiselweyo ekuhambeni kwexesha. Banokuba neenkani kwaye kube nzima ukushukuma, ukwala ukwenza oko kulungileyo kokuhle ngakumbi. Ukuba abantu ababini baseTaurean bayacaphukisana, sonke isihogo siyaphulukana nelahleko! Cinga ngemovie ethi 'The War of the Roses,' kunye noMichael Douglas noKathleen Turner. Emva koko ufumana umbono weeTaurus ezimbini ezithandanayo nezithiyanayo ngexesha elinye! Kungekudala ngaphambi kokuba umntu aphule i-knickknacks ethandekayo. Ngeli xesha, ngokuvutha komsindo, elinye iqabane liphela lijike kwi-chandelier yekristale!
Xa amaTaurus esilwa, ukhulula iinkunzi ezimbini zeenkomo kwibala lemidlalo, kwaye i-matador iphakamisa iflegi ebomvu! I-matador elumkileyo iyakufumana isihogo siphume apho! Akukho kumisa ingqumbo yenkunzi yomsindo! Izinto kuya kufuneka zizihambele ngokwazo ngaphambi kokuba le duo ilungise. Ukuthi 'ndiyaxolisa,' yinto ekufuneka yenziwe ngumntu waseTaurean. Kuya kufuneka bayoyise ubukhuni kwaye bajongane nenyaniso yokuba uxolo lukuvuma isenzo esingalunganga. Ukwenza ulungiso kunye nokucela ukuxolelwa kunegalelo kukuhambelana kweTaurus kunye neTaurus.
ITaurus kunye neTaurus Polarity
Kwiinkwenkwezi, iimpawu zeenkwenkwezi zihambelana neYin okanye Yang polarity. Iipolarities ziyafana nezo zibonwe kwiYin Yang uphawu lwembonakalo. Uluvo lokuma luphuma kwifilosofi yamaTshayina. Imikhombandlela ibhekisa kumandla obudoda okanye obufazi aphikisayo. Ezi zinto zichaseneyo ziyadibana, ziyancedisana, kwaye ziyaphikisana.
I-Yin kunye ne-Yang zivela kwigama elithi yin-yang elithetha into elungileyo okanye engakhanyisiyo. Eli gama likwahambelana negama lesiTshayina kwicala elishushu nelinomthunzi. Kwibhanti yeTaurus kunye neTaurus, amaqela alungelelana namandla e-yin. Amandla e-Yin ayenziwa, avelise, asasaze, athambile, kwaye acothe. Imikhosi ye-Yang iyahambelana nokusebenza okuqinisekileyo, okuqinileyo, okukhawulezayo, nokomileyo.
Ngemikhosi ye-Yin echaphazela amaTaurean, omabini amaqabane ayacinga, ayabonakalisa, kwaye athobekile. I-duo ihlala ithandana kwaye iyaphathana ngobuntununtunu kunye nokuthantamisa. Iibini zeTaurus kunye neTaurus zinembile. Ukudibana komnye nomnye ukuze babelane ngeengcinga bengakhange bathethe. Inomdla kwaye inengqiqo, isibini saseTaurean sabelana ngesivumelwano se-telepathic kunye nokuqonda.
Amandla okwahlulahlula amandla athetha ukuba i-Yin okanye i-Yang imikhosi ayilingani. Xa uYin epolisha, amandla anempembelelo avela njengobundlongondlongo, ukungakhathali, kunye nokufela ukholo. Ukulungelelanisa kwakhona, ukwamkela amandla e-Yin amandla kuyanceda. Iya kubuyisela imvisiswano phakathi komdlalo wothando weTaurus kunye neTaurus.
Imiba yeTaurus kunye neTaurus
Xa bejonga ukuhambelana, izazi ngeenkwenkwezi zijonga umba. Imiba yeempawu zeenkwenkwezi ngumgama phakathi kweempawu kwivili lasezulwini. Kuba amaqela kubudlelwane obuphindwe kabini-iTaurus babelana ngophawu olunye, akukho mgama wokulinganisa. Xa iimpawu zeenkwenkwezi ziyafana kubudlelwane, ziyahlangana.
Kubudlelwane obudibeneyo, ukuhambelana phantse sisiqinisekiso. Ukuthandana nomntu wophawu olunye kufana nokuthandana nawe! Unayo iqabane elicinga kwaye lenze phantse ngokufana nawe.
Ngoku, ngaphandle kokuba unomcimbi wokuzicekisa, ubudlelwane bokudibana buyaphupha! Xa izinto zigudile kubudlelwane obudibeneyo, omabini amaqela afunda ukuzithanda. Ukufezekisa uthando lwesiqu sakho, kwenza ukuba kube nako ukunyaniseka xa uthanda iqabane lomqondiso elinye.
I-Taurus kunye neTaurus Elements
Uphawu lwenkwenkwezi nganye luhambelana nenye yezinto ezine. Ukuzinza, ukuzinza, kunye neentloko ezilukhuni zeTaurus zihambelana nomhlaba. Impembelelo yesiqhelo inegalelo kumandla eTaurean, ukuzinza kunye neenkani. Ubudlelwane beTaurus kunye neTaurus buqukethe isiseko esisemgangathweni, esithanda umhlaba. Njengoko umhlaba uqinile kwaye uhlala uhambelana, kunjalo nobudlelwane beTaurus kunye neTaurus. Amaqela athembekile kwaye anoxanduva.
Obu budlelwane buya busendle kwaye bunomdla wokufudumala kunye nemfesane. Inkqubo yemihla ngemihla yonke intofontofo kubantu baseTaurean abathanda ukuhlala kamnandi. Apha kulapho iingxaki zikhona. Kulula kakhulu ukutyibilika kwindlela yesiqhelo ekruqulayo; Kulapho amandla omhlaba ebaleka ukubanda. Uthando luhamba ukusuka kwi-sizzle ukuya kwi-fizzle xa oku kusenzeka! Kuthatha umsebenzi oqhubekayo ukugcina ukuthandana kujonga!
Ke, isebenza njani indoda yaseTaurus kunye neTaurus Woman? Umtsalane phakathi kweTaurus Man kunye neTaurus Woman uvela ngokwendalo. Kuqhelekile ukuba ubudlelwane bobuTaure obuphindwe kabini buqale 'njengezihlobo nje.' Njengokuba esi sibini sinxibelelana, Bafumanisa iimpawu ababelana ngazo.
Kungekudala ngaphambi kokuba indoda yaseTaurus kunye neTaurus Woman ikhule isondele. Into elandelayo uyazi, bayadla iwayini kwaye batya omnye komnye kwiivenkile zabo abazithandayo. Xa bengatyi ngaphandle, bayaphekelana ekhaya.
Uza kubona indoda yaseTaurus kunye neTaurus Woman kwiwayini kunye noshizi ukunambitha imicimbi. Imihla ibandakanya iimarike zomfama ezisampulu zokutya okuphilayo, okanye ukucwangcisa iipikniki zeempelaveki. Qiniseka ukuba, bapakisha ibhasikithi ngolonwabo lwabo lwesisu!
Ngomntu waseTaurus kunye noMfazi waseTaurus, ubudlelwane buzinzile. Omabini la maqela alungelelene kakuhle. Indoda yaseTaurus inomoya opholileyo kwaye izolile, kodwa nokuba imeko yeemvakalelo ibuhlungu, umfazi waseTaurus uyamthoba. Ukulungele ukumamkela xa eyidinga. Unomdla, ke uyazi xa kufuneka athethe into ukukhuthaza indoda yakhe. Uyazi nokuba kubhetele ukuba ungathethi nto okanye xa kungcono umbambe nje umphulula. Ukuba ngumthombo wentuthuzelo omnye komnye kuphucula ukuhambelana kweTaurus kunye neTaurus.
Indoda yaseTaurus ingoyiki ukuzibophelela. Umfazi waseTaurus wonwabe ngakumbi xa esithi ewe xa indoda yakhe imcela ukuba abophe iqhina. Le duo ayinangxaki ekuboneni ulonwabo kwisiphelo kunye nobomi bothando oluhlala luhleli. Kodwa, banengqiqo. Omabini la maqela anobukrelekrele obuphezulu beemvakalelo. Kananjalo, bayazi ukuba ubomi babo bothando abuyi kuba nazingxaki.
Yeyiphi eyona ngxaki inkulu ejongene neTaurus Man kunye neTaurus Woman face? Inkani! Ngubani oyakuba ngoyena mbi ngokuba yintloko yenkunzi? Kunzima ukuxelela kwaye kuxhomekeke kumhla. KumaTaurean, akukho lucalucalulo ngokwesini oluchaza ukuba leliphi iqabane elinenkani ngakumbi! Ukuyekisa ayisiyonto iyonwabela le duo. Kodwa, sisakhono ekufuneka BASIPHILE!
Isibini seTaurus kunye neTaurus sinyanzelisa xa kuziwa kukunyaniseka. Indoda yaseTaurus ayinangxaki yokuhlala inyanisekile okoko nje ulwalamano lonwabile. Okufanayo kuya kuMfazi waseTaurus. Ingxaki yokuphuza ukuba ezi zimbini zityibilika kukuzithemba kwaye zithatha enye nenye. Iqela ngalinye liya kuziva ukuba elinye liyabaphatha kakubi. Njengezidalwa zenyama ezinqwenela intuthuzelo, akukabikho thuba lide ngaphambi kokuba omnye okanye bobabini bakhwaze bathi 'Ukunyaniseka kugwetyelwe!'
Induduzo kwiTaurus Man kunye neTaurus Umfazi ulwalamano yinto elungileyo. Intuthuzelo egqithisileyo ngumgibe wokufa. Ukuba kubakho ukukruquka, ubudlelwane buyema. Kukufa okucothayo kwaye okukhohlakeleyo kothando. Xa ubudlelwane buhamba bubusika, abantu baseTaurean baziva bethwa kukukruquka.
Umfazi waseTaurus kunye noTaurus ukuhambelana kwendoda akunakuphikwa. Ukuba umdlalo weTaurus kunye neTaurus bathanda ukoyisa imiqobo abajongana nayo, banesitshixo solonwabo lwanaphakade!
Umfazi waseTaurus kunye noMntu weTaurus banqanaba eliphakamileyo kwaye bayasekwa. Amaqabane kulo mdlalo wothando ayazi ukuba banokuxhomekeka omnye komnye xa iichips ziphantsi. Esi sibini siyayithanda indlela ecothayo kwaye kulula ukuyithanda. Bayavana ngokulula. Ngoba? Kuba abanangxaki ekuthetheni omnye nomnye ngayo yonke into.
Kubudlelwane beTaurus Woman kunye nobudlelwane beTaurus Man, omabini amaqela ayazi malunga nokunethezeka. Bafuna okona kulungileyo. Bahlala bevumelana xa kufikwa kumba wokuhonjiswa kwekhaya. Babelana ngeencasa xa bethenga izinto kunye nokuhlelwa komhlaba ngaphandle kwekhaya. Igumbi leTaurus Man kunye negumbi leTaurus lineliso lendalo ngobuhle kunye neposi.
Ngemikhosi ye-Yin echaphazela amaTaurean, umfazi waseTaurus uthambile, uthambile kwaye unobubele. Uhlala efumaneka xa iqabane lakhe lifuna indawo ethambileyo emhlabeni. Uyonwabile ukumamela iNdoda yaseTaurus ngelixa isusa iingxaki zayo esifubeni sayo. Umfazi waseTaurean unegalelo kuko konke anako kulwalamano. Ungumsebenzi okhutheleyo, kwaye ukuqaqamba kwakhe kumvumela ukuba akhwele kwileli yempumelelo.
Umfazi waseTaurus uphatha ikhaya njengetempile engcwele. Kodwa, kunjalo nangendoda yaseTaurean. Xa sisebenza kunye kuwo nawuphi na umsebenzi, sinenjongo efanayo ekugxilwe kuyo, esi sibini siya kuyazi impumelelo. Kubudlelwane beTaurus kunye neTaurus, indoda yaseTaurus isebenza njengomthombo wamandla amakhulu. Wenza iqabane lakhe liziva likhuselekile kwaye likhuselekile. Uyinkokeli yendalo kunye nomkhuseli. Nantoni na okanye nabani na osongela abathandekayo beNdoda yaseTaurean idibana nengqumbo yenkunzi!
yeyiphi iplanethi ekufutshane nelanga?
Omnye wemiceli mngeni emikhulu ejongene nale duo kukukhulisa uphawu. Yitsho ntoni? Umfazi waseTaurus kunye neTaurus Man ziyafana: Kufana nokujonga esipilini. Le duo izisa iimpawu ezifanayo kunye. Kubangela ukukhuliswa kweempawu zabo eziqhelekileyo.
Ukukhulisa iimpawu ezintle kulungile. Kodwa, khupha iimpawu ezinzima kwaye uqaphele! Ukuphinda kabini intloko-yenkomo? Phinda umona? Phinda kabini utyekelo lokulinganisa? Konke oku kuthetha inkathazo ephindwe kabini!
Unxibelelwano lweTaurus kunye neTaurus lolunye lolwalamano olunempumelelo kakhulu. Omabini amaqabane ayayazi into ayifunayo kubudlelwane obunothando. Bakhulisa ukuthembana omnye komnye ngokukhawuleza. Ingathi ukuthembana akukaze kube ngumbuzo konke konke ukuba ubudlelwane buhlala busempilweni. Ukonwaba okungapheliyo yintliziyo kunye nokuzibophelela kude nale duo yothando.
Imiceli mngeni ikhona kobu budlelwane, kodwa bambalwa noko. Abantu baseTaureans kufuneka baye kulwalamano beyazi imigibe enokubakho. Ukuba bayakwenza oko, bangaphambi komdlalo. Emva koko, banokuthi bajolise kwintando engaziwayo engenakuphikiswa kunye nenkani eqinile kwimiceli mngeni yobudlelwane! Ukuba benza njalo, akukho nto iya kubathintela ekufezekiseni uthando lobomi bonke! Ukuhambelana kweTaurus kunye neTaurus kuhlala kuyinkwenkwezi! Baza kuba sisibini samandla edynamo abaphila ngothando lwamaphupha banqwenela kakhulu!
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba uyahambelana neqabane laseTaurus? Mhlawumbi ufuna ukwazi ngokuhambelana phakathi kwezinye iimpawu zodiacac? Ukuhambelana kunokukufundisa okuninzi malunga nendlela yokufumana ubudlelwane! Kuko oko; ngokungathi unemephu yendlela yokwenza ubudlelwane busebenze! Ungakhathazeki; Lonke ulwazi oludingayo lusezandleni zakho. Apha kwi-Daily Horoscope Astros, ungaqala ukuphonononga ukuhambelana kwe-zodiac!
Funda konke malunga neTaurus Zodiac Sign
Cofa ukuze ufunde konke malunga Iimpawu zeTaurus, Ubuntu, kunye neempawu !
Ufuna uthando? Cofa ukuze ufunde konke malunga Ukuhambelana kweTaurus !
Fumana ulwazi olunzulu malunga Indoda yaseTaurus !
Chaza imfihlelo ye Umfazi weTaurus !
Ngaba unentombi yeTaurus okanye uNyana? Cofa ukuze ufunde konke malunga ne Umntwana waseTaurus !
Iintsingiselo ezincinci zeKhadi leArcana Tarot
Unyaka weRat yaBantwana: I-Chinese Zodiac Rat Traits yabantwana, Ubuntu kunye neempawu
Uphi iGalileo Spacecraft ngoku?
INKCAZELO YOKUCHAZA Iintaka-Iimpawu zePhupha loMzimba kunye neentsingiselo
Iphi i-OSIRIS-REx yesiphekepheke ngoku?
Umhlaza womntu uthandana nomfazi wescorpio
Ithetha ntoni inamba kwi-Chinese zodiac
capricorn man and leo woman in bed